Ungachinja sei bhatiri reApple Watch | IPhone nhau
Ungachinja sei bhatiri reApple Watch
Mushure bhatiri reiyi Apple Watch Series 1 yakazvimba uye yakakonzera kuti skrini isvetuke, pasina chaunorasikirwa pane yekunze-kwe-garandi wachi iwe yawanga usingade kubhadhara kuti igadziriswe, Ndakafunga kuchinja madhiramu ini, ndoomafambiro aakaita. (Spoiler: inoshanda).
Chokwadi iwe unoziva mumwe munhu ane Apple Watch "yakaputika", kana pamwe iwe pachako. Bhatiri reApple Watch parinosvika pachikamu charo chekupedzisira richizvimba, zvichikonzera kuti skrini isvetuke. Mumamiriro ezvinhu aya pane mhinduro mbiri dzinogona kuitika: enda kune Apple Store iri padyo ndokumbira kugadziriswa, kana kuirasa (kurasa bhatiri munzvimbo inoenderana, hongu). Mushure mekutsvaga nekukurumidza paAmazon uye nekuona chii gadziriso yebhatiri yeiyi Apple Watch Series 1 inodhura € 22 (link) Ndakafunga kuyedza, ndichinyatso kuziva kuti mukana wekuti € 22 ungakandirwa kure wakakura.
Chekutanga kushamisika kwaive kugashira yekugadzirisa kit, yakakwana kwazvo: bhatiri, anodiwa maturusi uye maviri anonamatira girazi. Kutevera nhanho dzandinokuratidza muvhidhiyo mumaminetsi mashoma ndakawana iyo Apple Watch Series 1 yekumutsiridza, hongu, mushure memaawa anenge matatu ekuchaja nekuti bhatiri rinosvika rasunungurwa zvachose. Ruzivo rwusingakwanise kufuratirwa kana ukaita izvi zvekugadzirisa: kuramba kwemvura kunoonekwa sekurasika, saka usashandise yako Apple Watch kana kugeza maoko.
Parizvino iyo Apple Watch inoshanda, handizive kana ichagara mwedzi, maviri kana gore. Ini ndinogona chete ruregerero kune chero nyanzvi inokwanisa akaona vhidhiyo iyi, asi chaive chinetso cheangu chega chandaifanira kuedza, uye parizvino mhedzisiro yacho yakandisiira kupfuura kugutsikana. Ehezve, chero munhu anoedza, zvirinani kuti uone rimwe gwara rekuti ungachinje sei bhatiri usati wadzika kuzoshanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Ungachinja sei bhatiri reApple Watch
Zvinoratidzika sechinhu chinonzwisisika kwandiri.
Ndanga ndichitora mukana wemidziyo yangu nekuchinja bhatiri kuti ndivatengese kana kuvasiira hama.
Pakutanga iwe unotya, asi pakupedzisira unoona kuti nebhatiri rakaipa hauna chaucharasa. Iwe unongofanirwa kuve neyakanaka vhidhiyo dzidziso, kushivirira, uye chenjera. Kune hupfumi, uye ecology, zvakafanira izvo.
Twitter inotambura kubhomba kukuru kwemaakaunti akasimbiswa
Spotify inotangisa "Podcast yepamusoro" uye "Podcast Tendencia" zvinyorwa munyika yako